တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှုများကြောင့် စိုက်ပျိုး၍ မရသောမြေများအား စစ်တမ်းကောက်ကာ မြေဆီလွှာများ - Yangon Media Group
တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှုများကြောင့် စိုက်ပျိုး၍ မရသောမြေများအား စစ်တမ်းကောက်ကာ မြေဆီလွှာများ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်အတွင်း တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှုများ ကြောင့် စိုက်ပျိုး၍မရသော မြေဆီလွှာများ ပြုပြင်သွားမည်ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးကန်ဇာမှုံက တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည်။ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် နတ်နန်းဒေသရှိ တရားမဝင်လုပ်ကိုင်နေသောရွှေမျောများ ပိတ်သိမ်းနိုင်ရန်နှင့် ပျက်စီးသွားသော လောင်းမင်းကျေးရွာ နွေစပါးစိုက်ခင်းလယ်ယာမြေများ၊ ပြန်လည် ပြုပြင်နိုင်ရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလို ကြောင်း ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦးသန်းညွန့်က တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်တွင် ဇွန် ၅ ရက်က မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”လောင်းမင်းကျေးရွာမှာ ချင်းတွင်းမြစ် ကမ်းနံဘေးတွင် တည်ရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးရွာသူရွာသားတွေဟာ နွေစပါး စိုက်ခင်းကို ရွာနဲ့တစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ နတ်နန်းချောင်းရိုးတစ်လျှာက် ချောင်းရိုးအောက်ပိုင်းကရေကို အမှီပြုကာ ဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းက လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမျောများမှ စွန့်ပစ်မြေစာပုံထုထည်ဟာ ချောင်းရိုးတစ်လျှောက် စီးဝင်ကာ ချောင်းလဲတိမ်ကောလာတယ်”ဟု ဦးသန်းညွန့်က ပြောသည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ချင်းတွင်းမြစ် ရေ ကြီးလာသည့်အခါ မြစ်ရေက ထောက်ထားသဖြင့် နွံပါလာသည့်ရေမှာ မြစ်အတွင်း မစီးဆင်းနိုင်တော့ဘဲ လောင်းမင်းကျေးရွာ နွေစပါး စိုက်ခင်းတွင် အနည်ကျလာသည်။ ထို့ကြောင့် လယ်ယာမြေပျက်စီးသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိ နေကြောင်း ¤င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
”အမှတ်(၂)စက်မှုတွင်းလုပ်ငန်းနဲ့ အကျိုးတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ကုမ္ပဏီများရှိသလို တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်တဲ့သူတွေလဲ အများအပြားရှိပါတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် မှုလဲများပြားတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပြုပြင်မှုမရှိခြင်း၊ ရံဖန်ရံခါ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို ထိခိုက်မှုတွေလဲရှိလာတယ်။ လောင်းမင်းကျေးရွာ စပါးစိုက်ခင်း ပျက်စီးတာ တွေ၊ စိုက်ပျိုးလို့မရတာတွေ၊ သီးနှံအထွက်နှုန်း လျော့တာတွေကိုလဲ စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် မြေဆီလွှာများ ပြုပြင် ပေးသွားမှာပါ”ဟု စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး ဝန်ကြီး ဦးကန်ဇာမှုံက ဖြေကြားခဲ့သည်။ တရားမဝင် ရွှေတူးဖော်မှု လျော့နည်း ရေးအတွက် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန သတ္တုရေးရာ တစ်ခုတည်းမှာတာဝန်ရှိခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အစဉ်အဆက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဌာနများမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း ဝန်ကြီးကဆိုသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရွှေသတ္တု နှင့် သယံဇာတများ တရားမဝင် တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှုများကို ထိရောက်စွာ ဖမ်းဆီးအရေးယူ နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရအဖွဲ့မှ မေ ၄ ရက်က ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်များတွင် ရွှေသတ္တုကြီးကြပ် ရေးအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းပေးထားကြောင်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လွယ်လွယ်ကူကူရတိုင်း အောင်မြင်မှု မရှိဘဲနဲ့ မလုပ်စေချင်?
အီကွေတာမျဉ်း ရေးဆွဲမှု မှားယွင်းခြင်းအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမများအား ညွှန်ကြားခြင်းဖြင့် ကုစားမည်
မန္တလေးတောင်ပေါ်သို့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များတက်ရောက်ကြေး တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန် စ
အေဂျက်ဇ် တောင်ပံကစားသမား ဂျက်စတင်က လွိုင်ဗက်အား ခေါ်ယူရန် မန်ယူ နီးစပ်နေခဲ့ပြီဖြစ်
ကမ်းဝေးငါးဖမ်း၊ ငါးသယ်ရေယာဉ်များအားလုံး မဖြစ်မနေအသုံးပြုရမည့် ဂြိုဟ်တုစနစ်ဖြင့် ရေယာဉ်ေ??
မလှိုင်မြို့ နယ်တွင် ထန်းလျက်ဈေး ကျဆင်းနေမှုကြောင့် ထန်းတောင်သူများ အခက်ကြုံနေ